Cuntada Rosé wine gummy + tababarka - Nacnac
Recipe Khamri Caam ah
Cunto macaan oo macaan oo khamri ah oo lagu sameeyay Rosé
Cunto macaan oo khamri ah oo lagu sameeyay Rosé! Runtii waan raadiyay cunto karis laakiin ma aanan helin mid dhadhamiya oo u eg khamri! Waxaan go aansaday inaan kaligeyga sameysto anigoo cuskanaya karinta gummy ! WAAN JECLAHAY sida ay noqdeen! Ka hadal daaweyn xiiso leh oo loogu talagalay qubeyska caruusadda! Way fududahay in la sameeyo waxaadna isticmaali kartaa nooca aad ugu jeceshahay Rosé.
Sideed u sameysaa khamri cufan
Isku qas khamriga aad dooratay, sonkorta iyo liinta dhadhanka (ikhtiyaar) Citric acid wuxuu siiyaa cufnaanta 'qaniinyada' taas oo ah nooca cunitaanka nacnaca miraha
Si tartiib tartiib ah ugu saydh gelatin-kaaga hal qaado oo yar yar markiiba, adigoo isku qasaaya inta udhaxeysa si looga hortago buruqyada
Microwave 30 ilbiriqsi, ku walaaq qaaddo, ka dibna ku dar 15-ilbiriqsi illaa gelatin la dhalaaliyo oo aan hadhuudh ku hadhin.
Isku darka ha fariisato daqiiqado, ka dibna xumbada ku qaado qaaddo oo iska tuur.
Ku shub isku darkaaga wasakhda aad dooratay oo qaboojiyaha geli. Waa la dejin doonaa saacado yar ka dib laakiin waxay dhadhamin doonaan chewier laba maalmood ka dib.
Hubso inaad ka soo saarto guntimaha caaryada markay qabow yihiin. Haddii aad dhibaatooyin ku qabtid iyaga oo si nadiif ah u soo baxa waad barafoobi kartaa si aad uga saarto.
Miyaad ku sakhraami kartaa cabitaanka khamriga?
Aragti ahaan, haddii aad cuni jirtay DHAMMAAN cabitaanno khamri ah hubaal waad sakhraami kartaa. Waxaa suura gal ah inaad marka hore caloosha ugu bukooto inkastoo sonkorta oo dhan darteed. Waxaa muhiim ah in la ogaado in khamrigan qamriga lagu sameeyay khamriga REAL ee khamriga ah sidaa darteed uma fiicna kiddos.
Ka fikir a Rosé khamri xanjo sida in ka badan oo ka mid ah daaweyn xiiso leh! Waxay u fiicantahay baararka macmacaanka, arooska ama xafladaha kale ee xafladaha loogu talagalay kuwa jecel khamriga!
Khamri noocee ah ayaa ugu fiican qamriga xanjada qamriga?
Marka tani waa su’aal dhagar badan. Waxay kuxirantahay uun khamriga aad jeceshahay! Waxaan adeegsaday Rosé ka socda Seasons New maxaa yeelay taasi waa waxa aan ka helay ee u muuqday mid wanaagsan laakiin haddii uu jiro summad aad doorbideyso, waxaan leeyahay isticmaal midkaas! Markuu khamrigu fiicnaado, ayaa sida khamriga cirridka u dhadhamiyaa u fiicnaanayaa!
Weli ma hubo khamrigan la iibsado? Fiiri liistadan kuwa ugu fiican Casaan ee 2019 talooyinka qaar.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa noocyo kale oo khamri ah sida khamri cas, khamri cad, prosecco ama champagne!
Sideed u sameysaa khamri beenta xanjada?
Waxaan dhawaan aqriyay in dadku ay kujiraan liiskan sugitaanka waalan si loo iibsado Rosé gummy bears . Aad ayey u qurux badan yihiin waxaana laga soo dhoofiyay Jarmalka. Waxaan ula jeedaa… tareenka Rosé maalintii oo dhan ayaa yimid dadkuna waxay leeyihiin dalab lol! Laakiin runtii waad iskaa u sameysan kartaa adigoon sugin.
Kaliya ku shub isku darkaaga ciridka a caaryada ciridka xanjo . Waxay noqon kartaa wax yar oo qasan haddii aad isticmaasho dhay isha. Waan jeclaaday caaryadan ciridka xanjo sababta oo ah way ka weyn tahay caaryada caadiga ah ee ciridka ciridka ah. Beer kasta dhererkiisu waa 1 ″. Ka samaysan silikoon cunto-badbaado leh oo la yimaada daadiyayaal! Dhibco!
keega strawberry ka xoq jello no
Samee adiga kuu gaar ah nacnac nacnac ah 'Rosé gummy'! Way fududahay in la sameeyo qaybta ugu wanaagsanna waa waxaad isticmaali kartaa nooca aad ugu jeceshahay Rosé! Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:5 daqiiqado Qabow habeenkii:2. 3 saacado labaatan daqiiqado Wadarta Waqtiga:10 daqiiqado Kalori:58kcal
Rosé Wine Gummy Waxyaabaha ay ka kooban tahay
▢12 oz (283.5 g) Khamri Waxa kale oo aad isticmaali kartaa casaan, cadaan, ama shaambada
▢4 xirmo (28 g) gelatin (sumadda Knox)
▢4 oz (113.4 g) sonkorta ama malab
▢4 oz (113.4 g) Sharoobada galleyda
▢1/4 tsp (1.23 g) aashitada ikhtiyaari ah
Khamrigaaga iyo sonkortaada ku dhex qas koob weyn oo lagu cabbiro
Si tartiib ah ugu saydhaa gelatinkaaga 1 tsp markiiba, adigoo isku qasaaya inta udhaxeysa. Ha ku shubin kaliya wax walba. Ubax ha ubaxdo 5 daqiiqo.
Ku dhalaali gelatin microwave-kaaga 30 ilbidhiqsi oo ku walaaq qaaddo (maahan shaashad). Kadibna 15 kordhin labaad illaa gelatin-ka uu milmayo oo uusan hadhuudh dambe ahayn.
U ogolow isku-darka ha fadhiisto 5 daqiiqo oo u oggolow xumbadu inay kor ugu kacdo dusha sare. Gelatin ku qaad dusha sare qaaddo.
Ku dar sharoobadaada galleyda oo walaaq
Ku dar dhibic yar oo casaan koronto ah 1/4 tsp oo biyo ah kuna dar isku darka gelatin haddii gelatinku u eg yahay mid aad u liice ah sida tayda oo kale.
Ku shub gelatin Rosé caaryada. Waxaan adeegsan jiray wasakhaha goos gooska laakiin xaqiiqdii waad isticmaali kartaa wasakhahaasi ciridka ciridka haddii aad doorbido.
Calool-xumadaadu waxay diyaar noqon doonaan saacado yar gudahood laakiin waa kuwo si hoose u jilicsan laba maalmood ka dib.
sida loo dhalaaliyo shukulaatada qurxinta
sida loo sameeyo keeg kiriim ah
sidee uga ilaalisaa in strawberries sameysmo
cuntooyinka keega leh ukunta oo keliya